Wada-xaajoodkii Biyaha Webiga Niil oo dub u furmay | Berberanews.com
Home WARARKA Wada-xaajoodkii Biyaha Webiga Niil oo dub u furmay
Wadaxaajoodka seddex geesoodka ee Itoobiya, Suudaan iyo Masar ee ku saabsanaa biyo xireenka ay Itoobiya dhiseyso ayaa dib u billowday.
Wakaaladda wararka ee Suudaan ayaa sheegtay wadaxaajoodka seddexda dal u dhaxeeya oo ku saabsan muranka webiga Nile oo qaab muuqaal ahaan ay dhinacyada u wadahadlayaan uu dhexdhexaadinayo Midowga Afrika.
Todobaad kahor wadaxaajoodkii dalalkaasi u dhaxeeyay ayaa natiijo la’aan kusoo gebagaboobay, kadib markii ay ku heshiin waayeen arrimo la xidhiidha qaabka loo buuxinayo biyo xireenka Itoobiya ay dhiseyso.
Itoobiya ayaa ku adkeysatay in bishan July ay billaabeyso buuxinta biyo xireenka.
Masar iyo Suudaan waxay dhankooda ku doodayaan inay Itoobiya billaabi karin buuxinta biyo xireenka ilaa heshiis buuxa ay seddexda dal gaaraan.
Wasiirka biyaha iyo waraabka dalka Masar ayaa sheegay in wadaxaajoodkii seddex geesoodka ahaa ay Jimcihii shalay gelinkii dambe dib u billowdeen si ay dalalka isula meel dhigaan waxyaabaha la isku mari lahaa.
Maanta oo Sabti ahna wasiirrada biyaha seddexda dal iyo guddiga farsamada ee wadaxaajoodka muranka biyo xireenka ku saabsan ayaa kulmay si xal looga gaaro.
Waxaana wadaxaajoodkaasi qeyb ka ah Koonfur Afrika, wakiillo ka socda Midowga Afrika iyo sharci-yaqaanno iyada oo ay goobjoog ka yihiin Mareykanka iyo Midowga Afrika.
Warmurtiyeed uu soo saaray xafiiska ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in heshiis iyo heshiis la’aanba uu dalkiisa bishan buuxin doono biyo xireenka.
Masar oo go’aanka Itoobiya ka xun ayaa codsi u gudbisay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay si ay usoo farageliso muranka webiga Nile ee seddexda dal u dhaxeeya.
Mashruuca dhismaha biyo xireenka oo muddo 10 sana ah socda ayaa dhismahiisu ku baxday lacag ka badan 4 bilyan oo doolar, wuxuu nadhismahiisu haatan marayaa 70%.
Mashruucan dhismahiisa marka ay Itoobiya soo gebagabeyso waxay ka dhalin doontaa koronto ka badan 6,000MW.
Previous articleBadhasaabka cusub ee Gobolka Saaxil oo xilka la wareegay
Next articleWaa maxay sababta Taiwan ugu faanayso xidhiidhka Somaliland?